न्याउरी मारी पछुतो ! - Laltin Media
Home»मोटिभेसन»न्याउरी मारी पछुतो !
कुनै बेला एउटा गाउँमा एकजना ब्राह्मण आफ्नी पत्नीसँग बस्थे । एक दिन, तिनीहरूले एक छोराको आशीर्वाद पाए। ब्राह्मणले बच्चाको रक्षा गर्न र उसको लागि साथी पाउनको लागि एउटा घरपालुवा जनावर राख्ने सोँचे। उनले घरपालुवा जनावरको खोजीमा जाँदा एउटा न्याउरीमुसा भेटे। उसलाई आफ्नो घरमा ल्याए।
सुरुमा, ब्राह्मणकी पत्नीले घरपालुवा जनावरको रूपमा न्याउरीमुसा राख्न अनिच्छुक थिइन्। तर पछि उनी राजी भइन् । न्याउरीमुसा र बच्चा घनिष्ठ साथी भए। ब्राह्मण र उनकी पत्नी दुवैले मुंगुसलाई आफ्नो बच्चा जस्तै माया गर्न थाले। तर ब्राह्मणकी श्रीमतीले बच्चाको नजिकै न्याउरीमुसा भएकोमा सधैं अलिकति शंका गर्थिन्।
कुनै दिन ब्राह्मणकी श्रीमती तरकारी किन्न बजार जानुपर्यो । उनले ब्राह्मणलाई बच्चाको हेरचाह गर्न भनिन्। बच्चा झोलामा शान्तिसँग सुतिरहेको थियो। त्यसपछि ब्राह्मण भिक्षा माग्न गए । उनले सोचे कि न्याउरीमुसाले बच्चाको हेरचाह गर्नेछ।
केही घण्टा पछि, ब्राह्मणकी पत्नी फर्किए र ढोकामा न्याउरीमुसा देखे। उनको मुख पुरै रगतले लतपतिएको थियो । उनले बच्चालाई न्याउरीमुसाले मारेको अनुमान गरिन् । एकैछिनमा रिसाएर उनले तरकारीको भारी टोकरी न्याउरीमुसामाथि फालिन्।
उनी आफ्नो बच्चाको खोजीमा कोठा तिर दौडिइन् र छक्क पर्दै, बच्चा अझै पनि झोलामा चुपचाप सुतिरहेको देखिन्। अनि भुइँमा टुक्रा टुक्रा पारेको मरेको सर्प थियो।
त्यसपछि बच्चालाई बचाउन न्याउरीमुसाले सर्पलाई आक्रमण गरी मारेको कुरा बल्ल बुझिन् । आफ्नो डरलाग्दो गल्ती महसुस गर्दै, उनी न्याउरीमुसालाई मृत फेला पार्न मात्र फर्किइन्। ब्राह्मणकी पत्नीले वफादार न्याउरीमुसालाई मारेको भन्दै ठूलो स्वरले रोइन्।
हतारमा काम नगर्नुहोस्। कार्य गर्नु अघि सोच्नुहोस्।
child stories motivation